သို့သော် Awomoyi နှင့်အတူသီးသန့်အင်တာဗျူး,, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Aquarist, Tosino ငါးလုပ်ငန်း
အားဖြင့် Posted: Fisayo ဇူလိုင်လ 25, 2013
ငါ့နာမကို Awomoyi Tosin ဂျိမ်းစ်သည်နှင့်ငါ aquarist ဖြစ်ကြောင်းကို. I am from Oye Local Government in Ekiti State and I’m the fourth of the five children of Mr. and Mrs. Awomoyi. I had my primary education at Bafom International School, Akute, secondary education at Command Day Secondary School, Abuja and my tertiary education at the School of Oceanography, Victoria Island Lagos where I studied Fisheries Technology.
Tell us about your business, Tosino ငါးလုပ်ငန်း.
2 မှတ်ချက်များ အပေါ် "သို့သော် Awomoyi နှင့်အတူသီးသန့်အင်တာဗျူး,, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Aquarist, Tosino ငါးလုပ်ငန်း"
Hon.Pc Nwaobiara | ဇူလိုင်လ 29, 2013 တွင် 12:18 နံနက် | ပြန်ကြားချက်
Benny | ဇန္နဝါရီလ 16, 2018 တွင် 2:32 ညနေ | ပြန်ကြားချက်